बुजुर्गका लागि फोन सुन्न धेरै सजिलो - Konnekt
सजिलो फोन सुन्नका लागि
कुरा गर्नुहोस्, सुन्नुहोस् र तपाईंको मनपर्ने कुर्सीबाट आरामसँग हेर्नुहोस्, कोठाको कहिँ पनि। को Konnekt भिडियोको साथ फोन सुन्न सजिलो छ LOWD र स्पष्ट, समायोज्य, र सबै "टिन्नी" छैन, दुई ठूलो अन्तर्निर्मित स्पिकरलाई धन्यवाद - एक आईप्याड, ट्याबलेट वा ल्यापटपमा स्पिकर भन्दा धेरै ठूलो।
हामी तपाईंको भिडियोफोन एकदम ठूलो स्वरमा बनाउन सक्दछौं यदि तपाईंलाई सुन्न समस्या आएको छ, वा नरम यदि तपाईंले अरूसँग साझा कोठामा प्रयोग गर्नु पर्छ भने।
गम्भीर वा गहन सुनुवाई गुमाउने वा बहिरापन? हाम्रो नयाँ को बारे मा पढ्नुहोस् Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन.
यो Konnekt भिडियोको साथ सुन्न सकिने फोन उनीहरूको लागि राम्रो छ-सुन्न-सुन्नको लागि। ठूलो 15 इंच (38 सेमी) पर्दा तपाईको कुराकानी लाईठ पठनको साथ बढाउनको लागि पर्याप्त छ।
साथी र परिवारले कुनै पनि पीसी वा म्याक कम्प्युटरबाट स्क्रिन-साझेदारी गर्न सक्दछन्। तिनीहरूले टाइप गरेर वा स्वचालित भ्वाइस-टु-टेक्स्ट प्रयोग गरेर पाठ पठाउन सक्दछ (हामीलाई कसरी सोध्नुहोस्)। त्यहाँ केहि पनि छैन Konnekt प्रयोगकर्ताले गर्न आवश्यक छ - केवल पाठ फिल्ममा क्याप्शन जस्तै जादुई देखा पर्ने हेर्नुहोस्।
यदि तपाईं श्रवण सहायता, इम्प्लान्ट वा हेडसेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, Konnekt ती लागि पनि समाधान छ। केवल सोध्नुहोस्!
संवेदनशील माइक्रोफोनले तपाईको बोलीमा हरेक उपद्रव देखाउँदछ, र तपाईलाई कोठाको वरिपरि हिँड्न र अन्य चीज गर्न दिन्छ जब तपाईं आफ्नो सामान्य आवाजमा कुरा गर्नुहुन्छ। यसले अर्को कोठाबाट आवाजहरू पनि सुन्न सक्दछ।
एक सुपर संवेदनशील वैकल्पिक बाह्य माइक्रोफोन एकदम नरम आवाजको साथ ती लागि आदर्श हो, वा जहाँ अर्को कोठाबाट सञ्चार गर्न कडा आवश्यक छ जब भिडियोफोनले जवाफलाई विश्वसनीय सम्पर्कहरूको जवाफ दिन्छ।
EXTRA लाउड भोल्युम, LARGE स्पिकरहरू
BIG स्क्रिनले ओठको पठनलाई सहयोग गर्दछ
एड्स र हेडसेटहरू सुन्नका लागि समाधानहरू उपलब्ध छन्
कम्प्युटर पाठ वाचकको लागि इनपुट
कुनै पनि पीसी / म्याकले पाठ र छविहरू पठाउन सक्दछ
यसले सुन्ने कठिनाई वा बहिरापन भएकाहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ?
यो Konnekt भिडिओफोन अतिरिक्त चर्को छ, रि ring् अनुकूलित गरिएको छ, सा -्केतिक भाषा र ओठ पढ्नको लागि पर्याप्त ठूलो छ, र श्रवण यन्त्रहरू, रिमोट टेक्स्ट सेयरि and र रिमोट स्पीच-टु-टेक्स्ट समर्थन गर्दछ। हेर्नुहोस् सुन्न नसक्ने अनुप्रयोगहरू, वा हेर्नुहोस् Konnekt अक्षमता भिडियोफोन अस्थिरताको साथ विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको (र थप अनौंठो सुविधाहरूको साथ) जस्तै सुनुवाई क्षति, वा हेर्नुहोस् Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन गम्भीर श्रवण हानि र बहिरापन को लागी।